के तपाईलाई थाहा छ,कुनबार कण्डमको बेपार दोब्बर हुन्छ ?
६ बैशाख २०७६ : कण्डम परिवार नियोजनको साधन तथा यौन रोगहरू सर्नबाट बचाउने साधन हो। कण्डम यौन सम्पर्कको समयमा पुरुषले प्रयोग गर्ने बस्तु भए ता पनि आजभोलि भने बजारमा महिलाले प्रयोग गर्ने महिला कण्डम पनि उपलब्ध भैसकेका छन्।
पुरुष कन्डम बजारमा सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ । सबैको मनमा यो कुरा खेलिराको होला कि मानिसहरु कुनबार काण्डम प्रयोग बदी गर्छन भनेर । प्राय जसो सबलाइ थाहा भइसको होला कि कण्डमको बेपार शुक्रबार बदी हुन्छ भनेर ।
काठमाडौंका मेडिकल हल र कण्डम हाउसहरुमा अरु दिनको तुलनामा शुक्रबार कण्डमको बिक्री झण्डै दोब्बर हुने गरेकोले पनि शुक्रबार अधिकांश दम्पती र युवायुवतीले यौन सम्पर्क गर्ने गरेको तथ्यले देखाउछ ।
शुक्रबार हप्ताको अन्तिम दिन र भोली पल्ट बिदा हुने भएकाले दम्पती र युवायुवती शुक्रबार यौन सम्पर्क गर्ने भएकाले कण्डमको बिक्री दोब्बर हुने गरेको मेडिकल हल र कण्डम हाउस सञ्चालक बताउछन् ।
राजधानीका अधिकांश होटेल, लज, गेष्टहाउस, भिलेज रिसोट पनि अरु दिनको तुलनामा शुक्रबार भरिभराउन हुने कारण मध्ये यौन सम्पर्क पनि प्रमुख कारण भएको होटेल, सिसोर्ट र लज सञ्चालकको अनुमान छ । कण्डमका साथै होटेल र रेष्टुराहरुमा मदिराको बिक्री पनि शुक्रबार बढी हुने गरेको पाइन्छ ।
काठमाडौंमा हरेक दिन कति कण्डम खपत हुन्छ ? यसको वास्तविक तथ्यांक कसैसँग नभए पनि दैनिक ५० हजार हाराहारी खपत हुने अनुमान स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्टिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको छ । तर शुक्रबार भने झण्डै एक लाखसम्म कण्डम बिक्री हुने गरेको मेडिकल सञ्चालकको दावी छ ।
राप्रपाको विरोध अभियान: आज धर्म निरपेक्षताको ब्यानर र पोष्टर जलाउने
के बार्सिलोना जित्ला यसपालि च्याम्पियन्स लिग? सेमिफाइनलका खेलबारे सम्पूर्ण जानकारी